Putin oo amray in 755 diblumaasi oo Mareykan ah ay isaga baxaan Ruushka. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Wararka caalamka Putin oo amray in 755 diblumaasi oo Mareykan ah ay isaga baxaan...
Putin oo amray in 755 diblumaasi oo Mareykan ah ay isaga baxaan Ruushka.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa amar ku bixiyey in diblumaasiyiin gaaraya 755 oo Maraykan ah ay ka baxaan wadanka Ruushka. Ruushka ayaa illaa kowda bisha September u qabtay Maraykanka inay kala baxaan diblumaasiyiintaas safaaradooda Moscow, arintan oo looga jawaabayo cunaqabateyn uu aqalka Congresska Mareykanku uu ansixiyay in la saaro Ruushka.
Labada Aqal ee Baarlamaanka Maraykanka ayaa ansixiyey in cunaqabateyn horleh la saaro Ruushka, taas oo jawaab u ahayd farogelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee 2016 iyo waliba dagaalada uu Ruushka ka wado Ukraine iyo Siiriya.
Xigasho/kilde: The Guardian
Previous articleKooxda Dahabshiil-Norway oo ku guuleysatay tartanka kubada cagta ee SEUKI
Next articleReuters: 18,6 milyan oo soo galootiga ah ayaa kunool Germany